Date My Pet » How To Date – Old School Style
Ukoshi Kuwedzera kuri kutora pamusoro zvinenge zvose, kubva pamuouki Mango muto iyo zvino ine awedzera karusiyamu, kuti ndibhadhare mari muchitoro iyo anotengesa zvigadzirwa kuti raitwa paine Masvomhu. asi, kune vaya vachiri vanosarudza chikoro yekare, kunyange kana totaura ukama?
zvisinei, mazambiringa ukama zano vanogona kuchengeta mvura itsva-zera mantras? Ko sezvo yaikosha sendarama? Ngationei.
Ramba chivalry mupenyu
Bvunza chero nomudzimai, uyo ave ari refu uye akabudirira ukama pamusoro chii akavaita tinya uye ivo ingangova kutaura kuremekedza kuti mandiruramisira yokumbokurukura. Just nokuti vakadzi murwire nekuenzana ose zuva, hazvirevi kuti vari kurwisa chivalry. Mukadzi angadai achiri kuda kuva noukama kwomumwe uyo racho rose ringakweva akabudisa cheya kana kunyange anomuzarurira musuo kwavari. Kuita izvi nokuti mukadzi kunoratidza ruremekedzo uye chinhu chinofanira mberi kunyange pashure muchato.
Vakaroorana vakambova nharo vanofanira nguva dzose edza kugadzirisa kunze wakadzikama asati achihudana usiku. zvisinei, pamberi munhu anogona wofunga nyaya, zvakafanira kudzikama kutanga, sezvo kuedza kuwana mhinduro ari munyoro-up mamiriro chete achiipa mamiriro. Vanofanira kuyeuka kuti nharo zvakaitika nemunhu vari kuda uye wavakanga vanoremekedza, saka yayo inokosha kugadzirisa nyaya yacho zvine rugare.
Rambai moto unopfuta
Kana vanhu vaviri atange kufambidzana nomumwe munhu, vanoita Achiedza nechokwadi chokuti nguva dzose anonzwa chaiwo, kugeza nerudo nechidakadaka . Kuti ukama kuti kwenguva yakareba, zvisinei, Vakaroorana vanofanira kushanda nesimba kuti tirambe zvakafanana chechetere yokuzvipira. Ukama All munoitika nezvisingafadzi, izvo zvakajairika. zvisinei, vanofanira usambobvumira ukama udzokewo chigaro. Vanofanira kuramba ukama zvakafanana mweya sepakutanga, nekuti chinhu akavadzivisa pamwe chete panguva iyoyo uye kukwanisa kuchengeta pamwe chete navo munguva inouya.
Musaedza kurega zuva richipfuura tisina kugoverana chaiyo kurumbidza. Zvingava kumurumbidza sei mumwe wako anotarira, sei kunhuhwidza kana kunyange sei vari vanoongwa. Vaudzei kuti zvinokosha zvikuru kupfuura goridhe. Chinonyanya kukosha ndechokuti munhu uve nemwoyo pamwe compliments dzavo. Zviri izvi zvishoma zvinhu kuti ukama zviripo. Zano iri angava zvaunganidzwa , asi zvinoshanda zvishamiso zvose iyezvino ukama.
Vaudzewo akaonekana navo nokusveta
Sezvavanogona vachidya akaonekana navo kutsvoda zvinganzwika saka nyore uye vasingakoshi vakaroorana kunakidzwa ukama hwavo, chaizvo uye kunosiya shure yakawanda netsiye. Kugovana ane akaonekana navo tsvodo imwe yenzira kuratidza sei munhu rudo kunogona kuva kwavo nemumwe. Uyezve, kuita nezuva izvi kunobatsira kusimbisa ukama, sezvo zvinoratidza rudo vanofunga kuti mumwe.
Tora kudya pamwe chete
Kutora kudya pamwe chete kunobatsira kuchengetedza ukama vakaroorana simba uye vakura. Kudzivisa mamiriro ezvinhu apo mumwe anodya panguva yokudyira, apo mumwe ari nokugara mumba, uchiona TV. Izvi hazvisi utano nokuda kwekuwedzera upi ukama. Kutora zvokudya pamwe chete kunoita kuti vakaroorana mukana Chat. zvisinei, Nyatsotarisa kuti chat vanofanira kuita kudya inakidzwe mumwe, izvo zvinoreva nyaya kuti anokonzera kukweshera uye musingaitirani nharo vanofanira kuregwa. Musimboti kutora kudya pamwe chete ndiko kuzorora, saka sarudza zvinonakidza dzokukurukura Chat pamusoro.
Kuramba zvinoyevedza chitarisiko nguva dzose
Munhu anofanira kugara takagadzirira kuenda imwe maira nokuvandudza chitarisiko chavo, kuti kutarisa zvakanaka kwavo mudiwa. Zvakanaka, saka pamwe donning pachavo vari suit kana coctail rokwe arege kuridza akasununguka zvachose, asi kuchengeta pachavo wakachena, vakanaka uye zvakanaka akaisa pamwe inotodiwa. Hazvina kutora rakawandisa nesimba kutarisa zvakanaka kwomunhu mumwe, kunyanya kana izvi zvichabatsira pakusimbisa ukama, sezvo imwe neimwe shamwari vachakwanisa varambe chido mumwe mupenyu.
Hapana nzira iri nani kuratidza kuti wevekare goridhe pane kuburikidza izvi ukama zanhi. Gold chinokosha simbi uye zvinokosha chaizvo. Saizvozvowo mweya, izvi mazambiringa rinokurudzira vari zvinokosha chaizvo kuti mamiriro ukama. saka, zvakakosha kuti munhu ari ukama yokuita mazano aya uye kuchengeta chinopa mupenyu nokusingaperi.
3 Great Tips To Kuumba The Best Online Dating Profile
Sei kuva Date-Sexy Kushandisa Your Shanu Wakasvinura
5 Chipa Winter Date Ideas